ओलम्पिक डे प्रतियोगितामा चार किर्तिमान – Khel Dainik
ओलम्पिक डे प्रतियोगितामा चार किर्तिमान
असार ८, २०७४ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । ओलम्पिक डे को अवसरमा आयोजित उमेर समूह तथा खुला पौडी प्रतियोगितामा उमेर समूहमा बिहिबार चार राष्ट्रिय उमेर समूह किर्तिमान कायम भएका छन् ।
नेपाल पौडी संघको आयोजनमा सातदोवाटोस्थित पौडी पोखरीमा भएको प्रतियोगिताको १२ बर्ष मुनीको ब्वाईज ५० मिटर ब्रेष्ट स्ट्रोकमा बिदेशमा अध्ययन गरिरहेका जेनिश महर्जनले ४०.५३ सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय किर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
यस अघि यस विधामा तरुण भण्डारीको नाममा ४२.५६ सेकेन्डको किर्तिमान थियो । दोश्रो भएका राजर्षी गुरुकुलका आदर्श कार्कीले पनि ४२.०० सेकेन्डका साथ किर्तिमान भंग गरेका थिए । तेश्रो भएका पाठशाला नेपालका तरुण भण्डारीले आफ्नो समयमा सुधार गर्दै ४२.३७ सेकेन्डमा दूरी पार गरेका थिए ।
यस्तै गल्र्स तर्फ पनि जोन डेवीकी डुवाना लामाको नाममा रहेको ४१.७२ सेकेण्डको समयलाई भंग गर्दै प्रिमियरकी उपास्ती महर्जनले ४०.१३ सेकेन्डले रेकर्ड कायम गरिन् । दोश्रो स्थानमा आएकी डुवानाले पनि आफ्नो समयमा ४०.५० सेकेन्डले सुधार गरेकी थिईन् । तेश्रो स्थानमा राजर्षीकी अनुसिया तन्डुकार रहिन् ।
बेष्ट स्ट्रोककै १४ बर्ष मूनीको गल्र्संमा लिंकनकी टिसा शाक्यले आफ्नै नाममा रहेको ४१.०३ सेकेन्डमो समयमा सुधार गर्दै ४०.९१ से.को नयाँ रेकर्ड कायम गरिन् । दोश्रो स्थानमा प्रिमियरकी श्रेबी महर्जन र तेश्रो स्थानमा जोन डेवीकी तेन्जिङ्ग शेर्पा रहिन् ।
५० मिटर फ्रिस्टायल १२ बर्ष मूनीको गल्र्स तर्फ जोन डेवीकी डुवाना लामाले आफ्नै नाममा रहेको ३३.५३ से.को समयमा सुधार गर्दै ३२.४७ से. समयको नयाँ रेकर्ड राखिन् । दोश्रो स्थानमा रहेकी राजर्षीकी अनुसिया तन्डुकार ३३.१२ से.का साथ दोश्रो र प्रिमियरकी उपास्ती महर्जन तेश्रो भए ।
दुई दिने प्रतियोगिताको १० बर्ष मुनीको ब्वाईज ५० मिटर बे्रष्टमा आईडलका लिसन डङ्गोलले ४८.९४ सेकेन्का साथ स्वर्ण प्राप्त गरे । दोश्रो र तेश्रो स्थानमा प्रिमियरका जिबिश पौडेल र डिएभीका अल्भिन महर्जन रहे । यस्तै गल्र्स तर्फ मिडल प्वाईन्टकी रितिना शाक्यले ५२.८४ सेकेन्डका साथ स्वर्ण पदकहात पारिन् । निसर्गका आयुक्ती थापा र राभ्या श्रेष्ठले रजत र काँस्य पदक हात पारे ।
ब्वाईजको १४ बर्ष मूनी ५० मि. ब्रेष्ट स्ट्रोकमा पाठशालाका सागर नायक ३९.५३ से.का साथ पहिलो भए । निसर्गका दिपंकर अवाले दोश्रो र जेम्सका राहुल दर्शन तेश्रो भए ।
१७ बर्षको ब्वाईज ५० मि.ब्रेष्ट स्ट्रोक तर्फ मेरिडियनका बैदज्ञ राज जोशीले ३९.०३ सेकेन्डका साथ स्वर्ण हात पारे भने हिम्सका रिजेन दुलाल र मेरिगोल्डका मनोज बखतीले रजत र काँस्यमा चित्त बुझाए । गल्र्सतर्फ ब्रिटिष स्कुलकी तेन्जीन यिगा लामाले ४७.८४ से.मा दुरी पार गरिन् । हिम्सकी देचेन गुरुङ्गले रजत र युष्का महर्जनले कास्य हात पारिन् ।
५० मिटर फ्रि स्टायल तर्फ १० बर्ष मूनीको ब्वाईजमा प्रिमियरका ईर्भिन श्रेष्ठले ३७.७८ से.का साथ स्वर्ण, डिएभीका अल्मीन महर्जनले रजत र प्रिमियरका जेविश पौडेलले कास्य पाए । गल्र्स तर्फ निसर्गका आयुक्ती थापा र राभ्या श्रेष्ठले स्वर्ण र रजत तथा राजर्षीकी यात्रा के.सी.ले कास्य पाईन् । आयुक्तीले उक्त दूरी ४२.२२ से.मा पुरा गरिन् ।
१२ बर्ष मूनीको ब्वाईजमा ३१.४० सेकेन्डका जेनिश महर्जनले स्वर्ण पाए । पाठशालाका तरुण भन्डारीले रजत र मल्पीका तेन्जिङ्ग नामदोल ¥यान गुरुङ्गले कास्य पाए ।
१४ बर्ष मूनीको ब्वाईजमा राजर्षीका मौलिक महर्जनले ३१.१६ से.मा स्वर्ण पाए । दोश्रो स्थानमा प्रिमियरका आरोग्य जङ्ग थापा र हिम्सका सोनम शेर्पाले समान ३३.५९ से.का साथ संयुक्त दोश्रो भए । गल्र्स तर्फ जोन डेवीकी तेन्जिङ्ग शेर्पाले ३३.९१ से.का साथ स्वर्ण, निसर्गकी समिरा शोभा थापाले रजत र राजर्षीकी अनुष्का पोखरेलले कास्य पाईन् ।
१७ बर्ष मूनीको ब्वाईजमा २८.५३ से.का साथ शिद्धार्थ बनस्थलीका नितेश मानन्धरले स्वर्ण प्राप्त गर्दा हिम्सका रिजेन दुलालले रजत र मेरिगोल्डका मनोज बखतीले कास्य पाए । गल्र्समा ब्रिटिषकी तेन्जिन यिगा लामाले ३५.२२ से.मा स्वर्ण पाईन् । युस्का महर्जनले रजत र हिम्सकी देचेन गुरुङ्गले कास्य पाईन् ।
← आर्मीका दल बहादुर र विमल च्याम्पियन फुटबलरद्वय भरत र राजु अमेरिका जाँदै →
वल्र्ड स्कुल स्पोर्ट्स टोली फर्कियो असार ८, २०७४
सागका स्वर्णधारी सनिलको जित असार ८, २०७४
आयोजक नव युवालाई उपाधि असार ८, २०७४
रोहितको टोली जकार्ताको मिश्रित लय जारी (भिडियोसहित) असार ८, २०७४
द राईजिङ र स्काई गोल्सलाई सफलता असार ८, २०७४
ढुकु र लुम्बिनीको जित असार ८, २०७४